Madaxweyne Gaas oo shaaciyay in la kordhin doonno tiradda baarlamaanka Puntland – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Gaas oo shaaciyay in la kordhin doonno tiradda baarlamaanka Puntland
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay warar maalmihii ugu dambeysay la isla dhex-marayay, kaas oo la xiriiray in la kordhinaayo tiradda xildhibaanada baarlamaanka Puntland.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay inuu warqad qoraal ah haatan u gudbiyay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi, isagoona sheegay in qoraalkiisa uu ku codsaday in guddoomiyaha uu furo baarlamaanka Puntland, si qabaa’ilka baarlamaanka ka maqan ay xubno metala u yeeshaan.
“Baarlamaanka Puntland ee 66-da ah 50% dadku waa ka maqan yihiin, qabiilada qaar waa ku jiraan, qaarna waa ka maqan yihiin, maxaa mid ugu jiraa midna ugu jiri waayay?, maxaa markii hore lagu saleeyay?” Sidaas waxaa yiri madaxweynaha Puntland C/weli Gaas.
Dhinaca kale, madaxweyne Gaas ayaa xusay inaysan xaq aheyn in baarlamaanka Puntland uu ahaado sidii lagu asaasay 19 sanno ka hor, isagoona dhinaca kale ballan ku qaaday in qabaa’iladda ka maqan uu xuquuqdooda u raadin doonno.
Illaa iyo haatan lama oga tiradda rasmiga ah ee lagu kordhin doonno baarlamaanka Puntland iyo tirada qabaa’ilka aanu ku lahayn cid ku matasha, balse madaxweyne Gaas ayaan weli ka hadlin in dib loo furi doonno dastuurka iyo inkale, taasi oo sal u noqon doonto in xubno cusub lagu darro.